UGoogle umazisa umphathi weTag kaGoogle | Martech Zone
Ukuba ukhe wasebenza kwindawo yabathengi kwaye kufuneka wongeze ikhowudi yokuguqula ukusuka kwiAdwords kwiitemplate kodwa kuphela xa loo template ibonisiwe ngeendlela ezithile, uyazi iintloko zamaphepha okumakisha!
Iimpawu zincinci zekhowudi yewebhusayithi ezinokunceda ukubonelela ngolwazi oluncedo, kodwa zinokubangela nemiceli mngeni. Amathegi amaninzi kakhulu angenza iisayithi zihambe kancinci kwaye zinqabile; iithegi ezingasetyenziswanga kakuhle zinokuyigqwetha imilinganiselo yakho; kwaye kunokuchitha ixesha kwisebe le-IT okanye iqela le-webmaster ukongeza ii-tag ezintsha-ezikhokelela kwixesha elilahlekileyo, idatha elahlekileyo, kunye noguquko olulahlekileyo.
Namhlanje, uGoogle ubhengezile Umphathi weTekisi yeGoogle. Esi sisixhobo esiza kwenza ukuba amaphepha okumakisha abe lula kakhulu kuye wonke umntu!
Iimpawu zomphathi weTag kuGoogle njengoko zidwelisiwe kwindawo yabo:
Ubuchule bokuthengisa -Ungavula iithegi ezintsha ngonqakrazo olumbalwa. Oku kuthetha ukuba ukumakishwa kwakhona kunye nezinye iinkqubo eziqhutywa yidatha ekugqibeleni zisezandleni zakho; Azisekho iiveki zokulinda (okanye iinyanga) zokuhlaziywa kweekhowudi kwiwebhusayithi- kunye nokusilela kwintengiso kunye namathuba okuthengisa kwinkqubo.
Idatha enokuthenjwa -Ukujonga ukusetyenziswa kweMpazamo yeGoogle ngokulula kunye nokulayisha ngokukhawuleza kwethegi kuthetha ukuba uya kuhlala uyazi ukuba yonke ithegi iyasebenza. Ukukwazi ukuqokelela idatha ethembekileyo kwiwebhusayithi yakho yonke kunye nayo yonke imimandla yakho kuthetha izigqibo ezinolwazi ngakumbi kunye nokuphunyezwa okungcono kwephulo.
Khawuleza kwaye kulula -Umphathi weTag kaGoogle uyakhawuleza, uyathandeka, kwaye uyilelwe ukuvumela abathengisi ukuba bongeze okanye batshintshe iithegi nanini na xa befuna, ngelixa benika i-IT kunye noogxa babo be-webmaster ukuzithemba ukuba indawo isebenza kakuhle-kwaye ilayisha ngokukhawuleza-ukuze abasebenzisi bakho bangaze bashiywe bexhonyiwe .
tags: Umphathi wethegi kaGoogleGoogle +tagUmphathi wethegiukumakishaTags
Uyila njani iLogo
Okt 3, 2012 ngexesha 3:30 AM
Khange ndiyizame le ndiyivileyo kuwe. Enkosi ngokukhomba oku, ukuthega kwenza kube lula kuwo onke amaphepha. Ngaba baqalisa iplagi nakwi-WordPress yokuthega?
Oktobha 3, 2012 ngo-5: 03 PM
Andikayiboni enye, @disqus_FHwBYQKmUU:disqus kodwa ayizukuthatha ixesha elide ukuphuhlisa enye!